Suuqa-Maanta: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga – Garsoore Sports
Suuqa-Maanta: Wararkii Ugu…
Suuqa-Maanta: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga
SHEEKADA HADALHEYNTA – CHELSEA OO LALA XIRIIRINAYO LEWANDOWSKI
Kooxda Chelsea ayaa xariir la samaysay kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich si ay ugala hadasho u dhaqaaqista Robert Lewandowski, sida laga soo xigtay Sky Sport Germany.
Thomas Tuchel kooxdiisa Chelsea ayaa loollan adag kala kulmi doonta Paris Saint-Germain iyo Barcelona, haddii ay dhacdo in Lewandowski uu go’aansado inuu ka tago Munich, halkaasoo uu saldhigiisu ahaa tan iyo 2014kii.
Chelsea ayaa lala xiriirinayay inay lacag badan kula soo wareegeyso ciyaaryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland, iyagoo soo bandhigaya awoodooda dhaqaale ee laga yaabo inay u wareegaan Lewandowski hadii ay waayaan xiddiga reer Norway.
Wararka kale ee suuqa
Manchester City ayaa kusoo baxday safka hore ee saxiixa xiddiga Tottenham Harry Kane sida ay qortay Daily Mail. Kane ayaa lagu soo waramayaa inuu codsaday inuu ka tago Spurs iyadoo lala xiriirinayo City, Manchester United iyo Chelsea.
Chelsea ayaa sidoo kale xiiseyneysa saxiixa xiddiga Atalanta Ruslan Malinovskyi, sida ay qortay The Sun. Daafaca Wolfsburg Maxence Lacroix ayaa sidoo kale diirada u saaran Blues, sida ay qortay Sky Germany.
The Sun ayaa sheegeysa in David Beckham kooxdiisa MLS-ka ee Inter Miami ay raadineyso weeraryahanka Arsenal Willian, kaasoo lagu soo waramayo inuu xiiseeynayo fursadan.
Frank Lampard ayaa diiradda u saaran Crystal Palace iyagoo qorsheynaya bedelka Roy Hodgson, sida laga soo xigtay Talksport. Hodgson ayaa ka tagi doona kooxda ka ciyaarta Premier League dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Corriere dello Sport ayaa sheegaysa in Gennaro Gattuso uu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda Napoli maadaama ay Fiorentina xiiseeyneyso wuxuu markaa uu doonayo kabtanka kooxda Lorenzo Insigne inuu kula soo biiro.
Tuchel Oo Qarka U Saaran Fulinta Howlgal Aan Macquul Ahayn (Mission-Impossible)
Kante Oo Looga Baqayo Inuu Seego Fiinaalka CL-ga.